ကိုကို ညီညီ မိခင်ဒေါ်ဥမ္မာလှိုင် နှင့် သူ၏ ရှေ့နေ ပြောပြချက် BBC အင်တာဗျူး Video
Local Celebrities News
International Celebrities News
Posted by Popping Box on October 7, 2019
(၆) တန်းကျောင်းသူလေးကို အုပ်စုဖွဲ့ သားမယားပြုကျင့်မှု ဖြစ်
တာဝန်ရှိယာဉ်ထိန်းရဲကိုမိုက်မိုက်ရိုင်းရိုင်းဆဲဆိုနေတဲ့အမျိူးသမီး ၂ ဦး ( ရုပ်သံ )
လိမ္မော်သီးများကို ဖျက်ဆီးခဲ့သည့်စည်ပင်ဝန်ထမ်း ၃ ဦးအား ကော်မတီဖွဲ့ ၍စစ်ဆေးနေဟု ဆို
ဒေါ်ဥမ္မာလှိုင် နှင့် သူ၏ ရှေ့နေ ပြောပြချက် BBC အင်တာဗျူး Video “တရားရုံးကျရင် အကုန် ချပြမှာပါ.” ။ (ဒေါ်ဥမ္မာလှိုင်)
“ကျွန်တော့် အမှုသည်က သူ့မှာ ဥပဒေအရ အခွင့်အရေး ရသင့်ရထိုက်တယ်ထင်လို့ သူ့အနေနဲ့ တောင်းဆိုတယ်၊ အဲဒီအတွက် ကျွန်တော်တို့ ဥပဒေနဲ့ အညီ လိုက်တာ”။ (ဦးအောင်ရဲစိုး၊ ဒေါ်ဥမ္မာလှိုင်ရဲ့ ရှေ့နေ)အောက်တိုဘာ ၇ ရက် (ဒီနေ့) နေပြည်တော် ပုဗ္ဗသီရိမြို့နယ် တရားရုံးမှာ စစ်ဆေးခဲ့တဲ့ ရှေ့နေ ဒေါ်စုဒါလီကို တရားစွဲထားတဲ့ အမှု ရုံးချိန်းမှာ တရားလို ဒေါ်ဥမ္မာလှိုင်က တရားရုံး အဖြေကိုပဲ စောင့်ကြည့် ဖို့နဲ့ ဗစ်တိုးရီးယား အမှုမှာလည်း ရုံးတင်ခံထားရတဲ့ သူ့ရဲ့ ဝန်ထမ်း ယဉ်မောင်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီးလည်း အမှန်တရား ဖြစ်ရမှာပါ၊
သူကျူးလွန်လား၊ မကျူးလွန်လားကို တရားရုံးက အဖြေထုတ်မှာပဲ လို့ မီဒီယာတွေကို ဖြေကြားသွားခဲ့ပါတယ်။ Wisdom Hill ပုဂ္ဂလိက မူကြို ကျောင်းရဲ့ ကြီးကြပ်ရေးမှူး ဒေါ်ဥမ္မာလှိုင်ဘက်က ပြီးခဲ့တဲ့ သြဂုတ်လ ၃၁၊ ၂၀၁၉ က ဗစ်တိုးရီးယား အမှုမှာ သံသယ တရားခံ အဖြစ် တရားရုံး တင် စစ်ဆေးခံနေရတဲ့ ကိုအောင်ကြီးရဲ့ ရှေ့နေ ဖြစ်သူ တရားလွှတ်တော်ရှေ့နေ ဒေါ်စုဒါလီအောင်ကို ရုံးချိန်း တစ်ခု မှာ မီဒီယာကို ပြောဆိုချက်တချို့က မိသားစုဂုဏ်သိက္ခာ ညှိုးနွမ်းစေပြီး –
ကလေးသူငယ် အပေါ် ထိခိုက် နစ်နာစေတဲ့ အတွက် ဆိုပြီး ပတ္တာနယ်ရဲစခန်းမှာ ပုဒ်မ ၂ ခု နဲ့ အမှုဖွင့်ခဲ့ရာမှာ ပုဗ္ဗသီရိမြို့နယ် တရားရုံးက တစ်ခုကို ပယ်ချပြီး ကလေးသူငယ်များ အခွင့်အရေး ဆိုင်ရာ ဥပဒေ နဲ့ စွဲချက်ကိုတော့ ပုဒ်မ ခွဲ ပြောင်းကာ ကလေးသူငယ် ဆိုင်ရာ ပုဒ်မ ၁၀၁ (က-၂) နဲ့ လက်ခံထားလို့ အခု ဒီအမှု ဒုတိယ ရုံးချိန်းကို ဒီနေ့မှာ စစ်ဆေးခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒေါ်စုဒါလီအောင် အမှုကို ဗစ်တိုးရီးယား အမှု ရုံးချိန်းနဲ့ မတိုက်အောင် နှစ်ပတ် တခါ တနင်္လာနေ့တိုင်း ဆက်လက် စစ်ဆေးသွားဖို့ ရှိနေပါတယ်။
“တရား႐ုံးက်ရင္ အကုန္ ခ်ျပမွာပါ.” ။ (ေဒၚဥမၼာလႈိင္)
“ကြၽန္ေတာ့္ အမႈသည္က သူ႔မွာ ဥပေဒအရ အခြင့္အေရး ရသင့္ရထိုက္တယ္ထင္လို႔ သူ႔အေနနဲ႔ ေတာင္းဆိုတယ္၊ အဲဒီအတြက္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဥပေဒနဲ႔ အညီ လိုက္တာ”။ (ဦးေအာင္ရဲစိုး၊ ေဒၚဥမၼာလႈိင္ရဲ႕ ေရွ႕ေန)ေအာက္တိုဘာ ၇ ရက္ (ဒီေန႔) ေနျပည္ေတာ္ ပုဗၺသီရိၿမိဳ႕နယ္ တရား႐ုံးမွာ စစ္ေဆးခဲ့တဲ့ ေရွ႕ေန ေဒၚစုဒါလီကို တရားစြဲထားတဲ့ အမႈ ႐ုံးခ်ိန္းမွာ တရားလို ေဒၚဥမၼာလႈိင္က တရား႐ုံး အေျဖကိုပဲ ေစာင့္ၾကည့္ ဖို႔နဲ႔ ဗစ္တိုးရီးယား အမႈမွာလည္း ႐ုံးတင္ခံထားရတဲ့ သူ႔ရဲ႕ ဝန္ထမ္း ယဥ္ေမာင္းနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးလည္း အမွန္တရား ျဖစ္ရမွာပါ၊ သူက်ဴးလြန္လား၊ မက်ဴးလြန္လားကို တရား႐ုံးက အေျဖထုတ္မွာပဲ လို႔ မီဒီယာေတြကို ေျဖၾကားသြားခဲ့ပါတယ္။
Wisdom Hill ပုဂၢလိက မူႀကိဳ ေက်ာင္းရဲ႕ ႀကီးၾကပ္ေရးမႉး ေဒၚဥမၼာလႈိင္ဘက္က ၿပီးခဲ့တဲ့ ၾသဂုတ္လ ၃၁၊ ၂၀၁၉ က ဗစ္တိုးရီးယား အမႈမွာ သံသယ တရားခံ အျဖစ္ တရား႐ုံး တင္ စစ္ေဆးခံေနရတဲ့ ကိုေအာင္ႀကီးရဲ႕ ေရွ႕ေန ျဖစ္သူ တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန ေဒၚစုဒါလီေအာင္ကို ႐ုံးခ်ိန္း တစ္ခု မွာ မီဒီယာကို ေျပာဆိုခ်က္တခ်ိဳ႕က မိသားစုဂုဏ္သိကၡာ ညႇိဳးႏြမ္းေစၿပီး –
ကေလးသူငယ္ အေပၚ ထိခိုက္ နစ္နာေစတဲ့ အတြက္ ဆိုၿပီး ပတၱာနယ္ရဲစခန္းမွာ ပုဒ္မ ၂ ခု နဲ႔ အမႈဖြင့္ခဲ့ရာမွာ ပုဗၺသီရိၿမိဳ႕နယ္ တရား႐ုံးက တစ္ခုကို ပယ္ခ်ၿပီး ကေလးသူငယ္မ်ား အခြင့္အေရး ဆိုင္ရာ ဥပေဒ နဲ႔ စြဲခ်က္ကိုေတာ့ ပုဒ္မ ခြဲ ေျပာင္းကာ ကေလးသူငယ္ ဆိုင္ရာ ပုဒ္မ ၁၀၁ (က-၂) နဲ႔ လက္ခံထားလို႔ အခု ဒီအမႈ ဒုတိယ ႐ုံးခ်ိန္းကို ဒီေန႔မွာ စစ္ေဆးခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ေဒၚစုဒါလီေအာင္ အမႈကို ဗစ္တိုးရီးယား အမႈ ႐ုံးခ်ိန္းနဲ႔ မတိုက္ေအာင္ ႏွစ္ပတ္ တခါ တနလၤာေန႔တိုင္း ဆက္လက္ စစ္ေဆးသြားဖို႔ ရွိေနပါတယ္။
သမ္မတဟောင်း ဦးသိန်းစိန် စင်္ကာပူနိုင်ငံမှာကွယ်လွန်ဆိုတဲ့ သတင်း
ရဲတစ်ဦးက KTV ဆိုင်မှာ ကြယ်စင် လမင်းအား သေနတ်ထုတ်ကြွားရာ ကျည်ထွက်သွား
မှောက်လျက်သေဆုံး နေသည့် အမည်မသိအမျိုးသမီးအလောင်း စစ်ဆေးပေါ်ပေါက်
စိုးမြတ်သူဇာနဲ့ ကုမ္ပဏီသူဌေး နှစ်ဦးသားရဲ့ လျိုဝှက် ဓာတ်ပုံနှင့် ဗီဒီယိုင်ဖိုင် ပေါက်ကြား
ဗစ္တိုးရီးယားေလးအမႈတြင္ ေနာက္ကြယ္က ႀကိဳးကိုင္သူကို ေဖာ္ထုတ္မည္ဟု သမၼတ႐ုံးကဆို
Popping Box Myanmar is your news, entertainment, music fashion website. We provide you with the latest breaking news and videos straight from the entertainment industry.
© 2020 Popping Box